Mooge/HIBF - Maalinta Labaad - Khamiis 23 Julaay 2009
Maalinta Labaad - Khamiis 23 Julaay 2009
Maalinta Labaad - Khamiis 23 Julaay 2009 - Guriga Shaqalaha, Waqtiga 09:00
Dhacdada Kowaad: Furitaanka Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa. Waxa hagaya Cabdillaahi Cawed Cige Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta ee Hargeysa waxa lagu soo bandhigayaa buugaag ay curiyeen qoreyaal ka socda dalka gudihiisa iyo debeddiisaba. Dhacdadani waxay si weyn u dhiirigelinaysaa ka qaybgal dadweyne oo waafi ah, inay goobta yimmaaddaan si ay u daawadaan, u akhriyaan u kala xushaan buugagga ulana kulmaan qorayaasha. Waxa isku waydaarsanaya hadal-wadaag qoraayada Xasan Cabdi Madar, Maxamed Baashe X Xasan, Sayid Maxamed Yuusuf iyo Cabdillaahi oo u qaybin doona hadalka. Waxana ay ka hadli doonaan fikirka iyo aragtida ka danbeeya Carwada buugaagta.
Dhacdada Labaad: Sahaminta Buugaagta. Waxa hagaya Xasan Cabdi Madar - Waqtiga 10:30–12:00
Koox qorayaal ah ayaa ku soo wareejinaya dadweynaha buugaagta kala duwan ee la soo bandhigayo inta uu socdo bandhiggu.
Dhacdada Saddexaad: Bandhig Buug- waxa hagaya Xuseen C Bulxan Waqtiga 16:00– 17:00
Waxa lagu soo bandhigayaa buugaagta ay qoreen Jamaal Cali Xuseen (Diiwaanka qosolka), Cabdiqaadir Nuur Huseen “Maax” (Sheeko baralay), Maxamed Mataan Jaamac iyo Maxamuud Ibraahin (Soomaalidu siday Geela u dhaqato). Qoraayadu waxay kala sheekaysan doonaan akhristeyaashooda qorshohooda dhaw iyo waxyaaba ay usoo wadaan. Su’aalo iyo jawaabo ayaa xigi doona.
Dhacdada Afraad: Darandoori – wax-akhris wadareed - Maxaa looga baahan yahay qorista sheekooyinka male-awaalka ah? Waqtiga 17:00 -18:00
Bulshada Soomaaliyeed waa bulsho hadasha (oral society), gabayga ayaa ah qaab suugaaneedka ugu mudan ee ay adeegsadaan halabuurka dadka af Soomaaliga ku hadla. Sheekada gaaban iyo kuwa qisada male-awaalka ahiba waa qaab suugaaneedyo ku cusub afka Soomaaliga. Galabtan waxa ‘qaybo-akhris’ (extracts) laga soo qaadanayo buugga Roge oo uu qoray Cabdillaahi Cawed Cige. Waxa wada darandoorin doona xubanaha Naadiga Hargeysa Readers Club ee ay ka mid yihiin Mustafe, Ilhaan, Khaalid iyo Farduus. Waxa intaas inoo raaci doona dood lagu falanqayanayo baahida loo qabo curinta male-awaalka iyo sheekooyinka.
Dhacdada Shanaad: Ciyaar Dhaqaneed ay bandhigayaan da’ yartu, waxa hagaya Maxamed Baashe - Waqtiga 19:30 – 21:30 isku dhaf, dhallinyaro iyo waayeel
Ciyaar dhaqameedku waxay ahaan jirtay dhacdo muhiim ah oo kulmisa dhallinyaro iyo waayeelba, waxa dhacdadan lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro farshaxankoodu aad u sarreeyo, Kooxda Hiddaha iyo Dhaqanka ee Sonyo ayaa ciyaarahaaas soo bandhi doona. Waxa halkan ka hadli doona dhaqan yaqaan ay ka mid yihiin: Baarleex, Xasan Ganey, iyo Yuusuf Shaacir, waxana lagu gorfaynayaa siyaabihii loo daryeeli lahaa hiddaha iyo dhaqanka gaar ahaan ciyaaraha.